Tetibolam-panjakana 2019: tsy omen’ireo depiote lanja ny fandaniana izany | NewsMada
Tetibolam-panjakana 2019: tsy omen’ireo depiote lanja ny fandaniana izany
Nampahafantatra ny fiarahamonim-pirenena Rohy, omaly, fa tsy omen’ireo depiote lanja ny fampiasana ny volam-bahoaka momba ny tetibolam-panjakana 2019. Manan-jo ny vahoaka, araka ny Lalam-panorenana, hahafantatra ny fomba fandanian’ny governemanta ny volany. Zava-dehibe momba izany lalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2019 izany ny hoentin’ny governemanta vaovao miasa amin’ny fitondrana manaraka.
Ny 21 novambara teo, nitondra fanazavana momba izany ny minisitra tompon’andraikitra, Andriambololona Vonintsalama. Ireo depiote mba tonga ao anatin’ny komity misahana ny tetibola anefa zara raha namakafaka izany antontan-taratasy matevina izany, ny 22 novambra. Nilaza fotsiny ny filohan’ny komity fa ny 26 novambra no hanapahan-kevitra momba io tetibola io. Nomarihin’ny fiarahamonim-pirenena Rohy fa ho tanterahina izany, nefa ny olom-pirenena tsy mahalala ny antsipiriany hatramin’izao ; tsy naka fotoana akory ireo depiote handalina ny momba izany ; tsy tena nisy fifanakalozan-kevitra teo amin’ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka.
Mitaky amin’ireo lazaina fa « solombavam-bahoaka » ny fiarahamonim-pirenena Rohy hanao ny adidiny manoloana ny fahefana mpanatanteraka, amin’ny maha solontenan’ny vahoaka azy. Noho izany, tokony hanokana fotoana izy ireo hanadihady ny tolo-dalàna ; hihaino sy hamakafaka ny andaniny hafa, toy ny fiarahamonim-pirenena ; hatao izay hisian’ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny olom-pirenena sy ny governemanta ; izay vao tokony hirosoana ny fandaniana ny tetibolam-panjakana.
Miandry fitondrana vaovao
Mazava aloha ny antony tsy hanomezan’ireo depiote ankehitriny lanja ny fandalinana ny tetibolam-panjakana 2019. Tsy ho eo amin’izany toerana izany intsony ny maro amin’izy ireo amin’ny fotoam-piasan’ny Antenimieram-pirenana manaraka, miaraka amin’ny fitondrana vaovao. Maro amin’ny olom-pirenena koa no tsy taitra amin’ireny fotoam-pivoriana misokatra ho an’ny rehetra ireny. Azo antoka fa tsy maintsy mbola hiverenan’ny depiote vaovao io lalàna momba ny tetibolam-panjakana io.